Accueil > Gazetin'ny nosy > Pôlitika
Ho mafy dia ho mafy ny valifaty
Ny fahitana ny fihetsika misy eo amin’ny mpanao pôlitika ao amin’ny fitondrana izay misy ny filoha Hery Rajaonarimampianina ankilany, ary ny tarik’ingahy Marc Ravalomanana andaniny, miampy ny lonilony isan-karazany izay misy amin’ny Mapar izay antokon’ingahy Andry Nirina Rajoelina filohan’ny tetezamita teo aloha ary sefon’ingahy filoha ankehitriny amperinasa, dia hita fa mifono lonilony sy ady mangatsiaka mahatsiravina.
Tsy hamerina ny fitanisana ny ady nifanaovan’ireo antoko ireo intsony isika fa efa maro no voalaza teto amin’ity gazety ity mahakasika fifandrafesan’izy telo lahy ireo. Mody mifampihatsara ivelatsihy izy ireo fa tena vonona ny hanao valifaty avokoa.
Ny Mapar izay nailikilikin’ingahy Hery Rajaonarimampianina sy potehiny ara-pôlitika dia mazava tsara toa ny tafika andrefan-tanàna ny adin’izy ireo. Tsy mitsahatra ny milaza ny tsy fetezan’ny fitondrana ary manao izay hirodanan’ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina ny Mapar tarihin’ingahy Andry Nirina Rajoelina. Mifampihantsy izy roa tonta ireo matetika ao Tsimbazaza ao rehefa mivory ny depiote. Indraindray aza dia efa tonga hatrany amin’ny fandrahonana sy fananganan-tsandry. Tadidintsika ny fifamaliana teo amin’ny depiote Jean Nicolas avy any Betroka sy ingahy depiote Naivo Raholodina avy eto Antananarivo, izay samy mpisolovava basivava ny antoko roa ireo daholo rehefa misy raharaha mafampana eto amin’ny firenena. Manao afon’ampombo ny adin’ireo antoko roa ireo ary mifampiandry amin’ny kendritohana avokoa. Isan’ny endrika ny ady mafana amin’izany ny raharaha senatera Lylison de René (senatera Mapar) izay nosazian’ny fanjakana HVM. Ingahy senatera Rina Andriamandavy VII (HVM) izay nitarika olona hikomy sy korontana teny amin’ny BIANCO tamin’ny raharaha Claudine Razaimamonjy, nefa dia nojerena fotsiny amin’izao.
Ny ady iray hafa dia ny TIM (Tiako i Madagasikara) izay tarihin’ingahy Ravalomanana Marc, filoham-pirenena sy ny antokon’ny fitondrana HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) izay tarihin’ingahy Hery Rajaonarimampianina filoham-pirenena ankehitriny. Tena ataon’ny fitondrana ankehitriny ny tsy hipoiran’ity antokon’ny filoha teo aloha ity. Ingahy Marc Ravalomanana dia azo lazaina fa nandrora mitsilany ihany satria azon’ny fanjakana amin’ny hadalana nataony hatramin’izay satria sady nanodinkodina volam-bahoaka no nangalatra ary nanararaotra ny fahefana teo aminy ka tsy nandoa ny hetra tokony haloany ho an’ny firenena. Ary mbola namono olona marobe koa tamin’ny 7 febroary 2009 , izay nitsarana azy ka nanamelohan’ny fitsarana azy higadra mandrapahafatiny sy hanao asa anterivozona koa. Noho izany dia giazan’ny fanjakana mafy amin’izany ingahy Ravalomanana Marc ka sahirana hatramin’ny orin’asa “AAA” izay nitondra ny anarana hoe TIKO teo aloha.
Mikotrika zavatra ratsy ho an’ny firenena ny fisian’ireo olana ara-pôlitika misy amin’ingahy Hery Rajaonarimampianina sy ingahy Andry Nirina Rajoelina, ary ingahy Ravalomanana Marc. Samy mpitondra firenena avokoa izy telo lahy ireo ary samy mbola mieritreritra ny hitondra indray manomboka amin’ny 2018.
Noho izany dia ho mafy ny adin’izy ireo ary hifamaly faty izy ireo. Tsy maintsy hisy ny fanapotehina hifanaovan’izy ireo amin’ny filatsahana hofidiana amin’ny taona 2018 ho avy io. Ny tena zava-doza dia ny valifaty hataon’ny iray amin’izy ireo amin’izay tsy lany. Mazava ho azy fa tsy hisy filaminana ho an’ny firenena ny filatsahan’izy telo lahy ireo indray.